TONTOLO IAINANA : Voarara ny fampiasana harona plastika manomboka amin’ny avrily
Manomboka ny 01 avrily dia tsy azo ampiasaina intsony ny harona plastika “50 microns”. Natao izany mba hiarovana ny tontolo iainana. 17 mars 2017
Fantatra mantsy fa any amin’ny zato taona any mihitsy vao levona ireny harona plastika ireny. Hisy araka izany ny fidinana ifotony amin’ny toerana ahitana mpivarotra harona plastika latsaky ny 50 microns manerana an’i Madagasikara ka hogiazana avy hatrany ny entana ho an’ireo mbola manana tahiry. Manoloana izany anefa dia mitaraina ireo mpivarotra.
« Mbola maro hoy izy ireo ny tahiry ao aminy ka sarotra ny fandaniana izany anatin’ny fe-potoana fohy ». Tsy ny mpivarotra ihany anefa no mitaraina fa esty ankilany ihany koa ireo mpanjifa. Araka ny nambarany dia resy lahatra izy ireo fa manimba ny tontolo iainana izy ireny saingy tokony mitady vahaolana hanolona izany ny Fanjakana vao manafoana azy ireny. Ilaina amin’ny fiaianana andavanandro tokoa mantsy ireny harona plastika ireny. Tsy mahavaha ny olona, hoy izy ireo, ny fampiasana ny taratasy hamonosana entana vidiana eny an-tsena fa ny harona ihany.